Safal Khabar - सुन्दर हुनु भनेको आवश्यकता होइन
सुन्दर हुनु भनेको आवश्यकता होइन
बुधबार, २७ चैत २०७५, १४ : ०६
– मेगान नोलान
मेरो गृहनगर आयरल्यान्डको सडकमा एउटा विशाल ऐना छ । त्यसले एउटा भवनको एकातर्फको भाग पुरै ओगटेको छ । मेरी आमाको घरबाट सहरको केन्द्रतिर जाँदा त्यो ऐना बाटामा पर्छ । टिनएजर भएपछि त्यो ऐना छल्न मैले अर्को बाटो हिँड्न थालेंँ । ऐना सधैं चमचमाउँदो र सफा हुन्थ्यो । त्यसमा सडकको छवि उदेकलाग्दो देखिन्थ्यो । त्यसले अनायासै मेरो छवि पनि मलाई देखाउँथ्यो, जसरी अरूले हेरिरहेका हुन्थे ।
गृहनगरको सडकमा रहेको त्यो ऐना अगाडिबाट हिँडेर पुस्तकालय जाँदा वा साथीहरूसँग पार्टीमा जाँदा वा पार्कमा जाँदा कस्तो हुन्थ्यो होला ? के मलाई आफ्नो शरीरले जे गर्न दिएको छ, त्यही गरेको देख्दा खुसी लाग्थ्यो होला त ? त्यसलाई वास्तै नगर्दा झन् के हुन्थ्यो होला ? हामीलाई भनिन्छ, सबैजना सुन्दर हुँदैनन् । सुन्दर नै किन हुनुपर्छ त ? (न्युयोर्क टाइम्सबाट)